Booliska Dowlada Soomaaliya oo ka warbixiyay qarax naftii halige uu ka fuliyay maqaaxi dad rayid ah ay ka cunteynayeen. | Somali National Television - sntv.so
Home WARARKA MAANTA Booliska Dowlada Soomaaliya oo ka warbixiyay qarax naftii halige uu ka fuliyay...
Booliska Dowlada Soomaaliya oo ka warbixiyay qarax naftii halige uu ka fuliyay maqaaxi dad rayid ah ay ka cunteynayeen.
5 qof ayaa dhimatay 8 kalana waa ay ku dhaawacmeen kaddib markii qof naftii halige ah uu isku qarxiyay Maqaayad laga cunteeyo oo ku dhaw dugsiga tababarka ciidamada Booliska Soomaaliyeed ee Jeneraal Kaahiye.
Kornayl Sadiiq Aadan Cali Afhayeenka Ciidanka Booliska Soomaaliyeed oo la hadlay Warbaahitna ayaa sheegay in falka ka dhacay goobta maqaayadda uu ka dambeeyay qof naftii halige ah oo isku soo rakibay waxyaabaha qarxa,
Afhayeenka ayaa Ummadda Soomaaliiyeed uga tacsiyadeeyay dadkii shacabka ahaa ee ku nafwaayay qaraxii maanta ka dhacay Muqdisho, waxaana uu Alle uga baryay kuwa ku dhaawacmay in uu u boogdhayo.
Qofka ismidaamiyay ayaa xirnaa jaakadda walxaga qarxa.
Previous articleDowladda Jarmalka oo deeq dawo ah ku wareejisay Itoobiya.
Next articleDowlada Ingiriska oo ku Baaqday in la joojiyo Colaada Dalka Itoobiya.